नारायण दाहाल ‘रिप्लेसमेन्ट’ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड !
काठमाडौं, २३ भदौ । राजनीति र मुलुकको केन्द्रविन्दु चितवनबाट चुनाव लड्ने घोषणा गरेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा माओवादी केन्द्रको चितवन रिप्लेसमेन्ट आफैं बनेका छन् । भाइ नारायण दाहाल चितवनका इञ्चार्ज हुन् । तर, अब भाइप्रति उनको विश्वास गुमिसकेको उनको घोषणाले प्रतित गरिसकेको छ । ‘म चितवनबाट चुनाव लड्छु’, उनले शुक्रबार पत्रकारमाझ खुलासा गरे ।
प्रचण्डले चितवनमा आफ्नो राजनीतिक विरासतको उदय गराउने प्रयत्न भने केही महिनाअघिमात्र गरेका होइनन् । यो एक वर्षअघिदेखिको योजनानुसारको घोषणा हो । काठमाडौं, सिरहा या रोल्पामा हार्ने त्रास भन्दा पनि राजनीतिक विरासत निर्माणका लागि उनी चितवनबाट लड्दैछन् । आफु शक्ति केन्द्र र कार्यकारी पदमा रहँदा चितवनसँग उनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध बलियो नहुनुको कारणका विकल्पमा पनि उनी चितवन छिरेका हुन् । ‘अब जन्मथलोबाटै चुनाव लड्छु । एक ठाउँमा लड्ने भएकाले चितवन फर्किएको हुँ ।’, उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
प्रचण्डको यो घोषणा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वभित्रको पारिवारिक राजनीतिको चिरफार पनि हो । चितवनको राजनीतिलाई प्रचण्ड परिवारमा नारायण दाहालले मात्र उपयोग गरेका थिए । ‘चितवनको संगठनको कुरा होइन उद्योग वाणिज्यदेखि हरेक कुरामा नारायण दाईको मनोपोली बढेको सवैले ठानेका थिए त्यसकारण त्यहाँ हस्तक्षेप गर्ने बेला आएरै यो निर्णय भएको हो ।’, प्रचण्डनिकट स्रोतले भन्यो,‘रेणु दाहालले जित्दा जित्दै हार्ने परिस्थिति झन्डै आएको थियो, त्यसमा पनि नारायण दाईको भुमिका देखियो ।’
प्रचण्ड सानो घेरालाई मात्र विश्वास गर्छन् । उनी परिवारभन्दा अरूलाई विश्वासमा लिन सक्तैनन् । त्यसकारण आफ्ना स्वकीय सचिवहरूको घेरामा छोरालाई युद्धकालदेखि नै अहिलेसम्म राखिरहेका छन् । खासगरी पहिलो पाइला रेणु दाहालको भरतपुरको उम्मेदवारीमार्फत राखे । त्यहाँ माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले त सहयोग गरे तर भित्रि रूपमा नारायण दाहालको असहयोग रह्यो । बालुवाटार र लाजिम्पाटसँग चितवनको सोझो कनेक्शनमा रेणु देखिने भएपछि नारायणले भतिजि हराउनका लागि एमालेसँग निक्कै गोप्य छलफल चलाएका थिए । ‘रेणु दाहाल हराएपछि प्रचण्डको चितवन आउने सपना तुहिने र माओवादीको चितवन राजनीतिमा आफु हावी भइरहने उनको योजना नै थियो तर त्यो सबै उल्टो भयो’, प्रचण्डनिकट स्रोतले भन्यो,‘यसको खबर अध्यक्षलाई बारम्बार भएको हो । तर, जब मतपत्र च्यातिएर विवाद आयो त्यसबेला नारायण दाहालको निस्क्रियता देखेपछि उहाँले बुझिसक्नु भएको थियो ।’
त्यसो त राजनीतिक विरासत लामो बनाउनका लागि पनि प्रचण्डले आफूलाई चितवमा उभ्याएका हुन् । राजनीतिक उत्तराधिकारीका रूपमा नारायण दाहाललाई हटाउँदै रेणु दाहाललाई चितवन छिराएका प्रचण्डले अबको विरासतको राजनीति त्यहिँबाट थाल्दैछन् ।
प्रदेश र संसदको चुनाव मंसिर १० र २१ मा गर्ने निर्णय भइसकेको छ र चितवनमा तीन वटा निर्वाचन क्षेत्र बनेको छ । त्यसमध्ये एउटामा प्रचण्ड लड्नेछन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रclose
यस्तो छ धुलोसहित पानीको रामकहानी
सांस्कृतिक रुपान्तरणमा सुशिला, बसिन् बाबुको किरिया
६० वर्षदेखि जमिनका लागि संघर्ष
निशुल्क उपचार गराईदिन गरिब बिरामी खोज्दै हिड्छन् यी चिकित्सक
‘सेक्स गुरु’ ओशोका अंगरक्षकले आश्रमबारे गरे यस्तो खुलासा
प्रदेश, प्रदेश ४, फिचर पोस्ट
त्यसैले त पोखरा
ठेकेदार घरबेटी चलाएपछि बादललाई प्रचण्डको यस्तो सजायँ
प्रचण्ड र पार्टी परिवर्तनः एकै जीवनमा आठ पार्टीको अध्यक्ष
चीनमा गाउँ फेर्दै स्वयम्सेवी शिक्षकशिक्षिकाहरु, आशावादी बन्दै विद्यार्थीहरु
‘अरुण तेस्रो सम्झौता’ र मूल्य वृद्धिविरुद्ध नयाँ शक्तिका युवाहरु प्रदर्शनमा (तस्बिरहरु)
इजरायल-प्यालेस्टाइन संघर्षको यस्तो छ ७ दशक पुरानो नालीबेली
विकासले यसरी भत्काइरहेछ दलित बस्ती
महाथिर यसरी बने विश्वकै वृद्ध निर्वाचित प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री अहिले नै पक्का, जनयुद्धको जिम्मा महाधिवेशनलाई !
बाबुरामको पहल बल्ल बन्यो सफल, छ वर्षपछि फेवातालको अतिक्रमण रोकिँदै
बौद्धदर्शनः दुःख मुक्तिको मार्ग, यस्तो छ त्रिसंयोगको सन्दर्भ
व्यवसायले फेर्‍यो जनयुद्धले फेर्न नसकेको जीवन